Mandhera oo dagaal qarka u saaran kadib markii ay galeen ciidan Soomaali ah | Xaysimo
Home War Mandhera oo dagaal qarka u saaran kadib markii ay galeen ciidan Soomaali...
Mandhera oo dagaal qarka u saaran kadib markii ay galeen ciidan Soomaali ah
Barasaabka Mandhera Cali Roba ayaa sheegay in ciidamo Soomaali ah ay usoo gudbeen dhankooda, islamarkaana xiisadda ka dhex oogan dowladda federaalka iyo Jubaland ay halis ku hayso.
Cali Roba ayaa sheegay in qabsashada ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmada Beled-Xaawo ay soo barakicisay ciidamadii Jubaland, kuwaas oo usoo baxsaday, haatanna ku sugan Mandhera.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay inay ceyrsanayaan wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan, oo isna la rumeysan yahay inuu ku sugan yahay Mandhera.
“Ciidamadii soo cararay waxay usoo gudbeen Kenya, waxayna hadda ku sugan yihiin gudaha Mandhera. Tani waxay halis amni oo weyn ku tahay shacabkeena,” ayuu yiri Cali Roba oo la hadlay golaha Mandhera.
Cali Roba ayaa ka digay in Nairobi ay mas’uul ka noqon doonto haddii dhib uu soo gaaro shacabka Mandhera.
“Waxaan ka codsaneynaa dowladda inay sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada uga saarto ciidamada Jubaland, si loo nabad-geliyo Mandhera. Xaaladda waa ay sii xumaaneysa, waxaana qarka u saarannahay dagaal weyn oo shacabka waxyeeleeya.”
Hadalka Roba ayaa imanaya ayada oo horey ay u jirtay cabsi laga qabo in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka gudbaan xuduudda, si ay halkaas uga soo qabtaan Cabdirashiid Janan, oo 28-kii Janaayo kasoo baxsaday Muqdisho.